ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရှာဖွေခြင်း- အိန္ဒိယရှိ ထိပ်တန်းကျောင်းတစ်ခု၏ လူမျိုးစုစာရင်း - ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှု
ဇန်နဝါရီလ 17, 2022 သုတေသန 0
Ashmeet Kaur ၏ 'ငြိမ်းချမ်းရေးရှာဖွေခြင်း- အိန္ဒိယရှိ အထက်တန်းစားကျောင်းများ၏ လူမျိုးစုပုံပညာ' (2021) ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသော Ashmeet Kaur ၏ ပါရဂူသုတေသနစာတမ်းသည် တရားဝင်ကျောင်းတစ်ခုတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေး၏ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းမှုကို စူးစမ်းလေ့လာသည်။
ကိုးကားချက်- Kaur၊ A. (2021) ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရှာဖွေခြင်း- အိန္ဒိယရှိ ထိပ်တန်းကျောင်းတစ်ခု၏ လူမျိုးစုစာရင်း. [ပါရဂူဘွဲ့စာတမ်း၊ TERI အဆင့်မြင့်လေ့လာရေးကျောင်း၊ နယူးဒေလီ၊ အိန္ဒိယ]
လူသားအသွင်ကူးပြောင်းရေးတိုက်ပွဲသည် လူ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခုအဖြစ် ကာလကြာရှည်ခဲ့သည်။ သို့သော်ယနေ့; ၎င်းသည် လူသားဆန်သောအေဂျင်စီအတွက် ပညာရေးပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ ခေတ်ပြိုင်ဟောပြောချက်အား ရူပဗေဒဗေဒအရ အထူးကောင်းမွန်လာသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ပညာရေးသည် အကြမ်းဖက်မှုကို ရင်ဆိုင်ရန် အရည်အချင်း၊ တန်ဖိုးထားမှုများ၊ အပြုအမူနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများကို တည်ဆောက်ရန် ရည်ရွယ်သည်သာမက အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင်ကြားရမည့် ရည်ရွယ်ချက်၊ အကြောင်းအရာ၊ သင်ကြားရမည့်အရာ၊ သင်ကြားနည်း၊ သင်ကြားနည်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးတန်ဖိုးများ ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း။ (Kester၊ 2010:59)။ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ပညာရေးကို အထောက်အကူမပြုမီ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် လူသားဆန်သော အလားအလာကို ကယ်တင်ရန် လိုအပ်သည် (Kumar, 2018) ဟူသော ငြင်းခုံချက်ကို ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။
သို့သော် EfP ၏ ပညာရေးအားဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်မှာ မိရိုးဖလာကျောင်းပညာရေးအဖြစ် တရားဝင်အရှိဆုံးသော သရုပ်သဏ္ဍာန်နှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိကြောင်း စိန်ခေါ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ယနေ့ခေတ်ကဲ့သို့ တရားဝင်ကျောင်းပညာရေး၏ဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များအတွင်း EfP ကို ​​ခေတ်စားလာစေရန် ဤသုတေသနကို အလေးထားလုပ်ဆောင်ရခြင်းဖြစ်ပေသည်။ ဤအဆုံးသတ်သို့ရောက်ရန် သုတေသနသည် တရားဝင်ကျောင်းတစ်ခုတွင် လက်တွေ့တွင် မည်သို့သဘောပေါက်သည်ကို နားလည်ရန် EfP ၏ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းမှုကို စူးစမ်းလေ့လာသည်။
ဤအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ လူမျိုးစုစာရင်းသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ထိပ်တန်းနိုင်ငံတကာ လူနေကျောင်းများ၏ ဟောပြောချက်ဆိုင်ရာ ဒိုင်နမစ်များကို ဖော်ထုတ်ပေးသည့် Rolland School ဟု အမည်ဝှက်ထားသော ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ပညာပေးခြင်း သို့မဟုတ် ငြိမ်းချမ်းရေးကို မြှင့်တင်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟူသော ယူဆချက်ကို ဖြေဆိုရန် ဖြစ်သည်။ (Kumar၊ 2018၊ Gur-Ze'ev၊ 2001)။ လေ့လာမှု၏ နိယာမရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျောင်း၏ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် EfP ၏ စံနမူနာများကြား အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာရန်ဖြစ်သည်။ ငြိမ်းချမ်းရေး သီအိုရီများနှင့် Rolland ၏ ပညာရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်များ လမ်းဆုံတွင် မြှုပ်ထားသည့် ကွဲပြားသော အသံများကို စူးစမ်းသည်။
ထို့ကြောင့်၊ ဗဟိုရည်မှန်းချက်မှာ EfP ၏ပုံစံများကို မည်သို့တည်ဆောက်ပုံ၊ ခွဲဝေပေးကာ ၎င်း၏နေ့စဉ်ဘဝများတွင်လည်း ကွဲလွဲသွားစေရန် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်များ၏ ရှုပ်ထွေးမှုများကို ဆန်းစစ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤအဆုံးသတ်တွင်၊ ဤသုတေသနပြုချက်သည် 1) Rolland သည် EfP ကိုမည်သို့သဘောတူသနည်း 2) EfP အလေ့အကျင့်များကိုမည်သို့လုပ်ဆောင်နိုင်သနည်း 3) မည်ကဲ့သို့စနစ်တကျနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာလွှမ်းမိုးမှုများသည်ကျောင်းရှိ EfP အလေ့အကျင့်များကိုကန့်သတ်ထားသည်။
ဤသုတေသနအတွက် တွန်းအားမှာ Rolland ရှိ နေ့စဉ်ဘ၀၏ ရှင်သန်နေသော အတွေ့အကြုံများနှင့် သင်ကြားပြသမှုများတွင် အမြစ်တွယ်နေပါသည်။ ၎င်းသည် စဉ်ဆက်မပြတ် ကွင်းဆင်းလေ့လာခြင်းမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော စူးစမ်းလေ့လာမှုအပေါ် မူတည်သည်။ ၎င်းတွင် အရိပ်ပြခြင်း၊ စာသင်ခန်းအတွင်း စောင့်ကြည့်မှုများ၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ တစ်ပိုင်းပုံစံ အင်တာဗျူးများ၊ ရောင်ပြန်ဟပ်သော မှတ်စုများနှင့် အချက်အလက်များကို ထုတ်ယူရန်အတွက် ပြင်ဆင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များလည်း ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည် စနစ်ကျသော သင်္ကေတများနှင့် အဓိပ္ပါယ်များကို နားလည်ရန် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများနှင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၏ ကွဲပြားမှုများကို လေ့လာခဲ့သည်။ ပါဝင်သူများ၏နေ့စဉ်ဘဝ၏ကြာရှည်စွာအနီးကပ်နေထိုင်ခြင်းနှင့်ကျောင်းရှိဘဝ၏လက်တွေ့ဖြစ်ရပ်များကိုနှစ်မြှုပ်ခြင်းဖြင့်သရုပ်ဆောင်များသည်သူတို့၏လူမှုရေးဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်မှန်များကိုတည်ဆောက်ပုံ၏အထူဖော်ပြချက်များအားနားလည်ခဲ့ကြသည်။
လူမျိုးစုဆိုင်ရာ ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုပြီးနောက်၊ နယ်ပယ်မှ ပေါ်ထွက်လာသော ထင်ရှားသောအကြောင်းအရာများသည် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို လမ်းညွှန်ခဲ့သည်။ သုတေသနသည် ငြိမ်းချမ်းရေးသီအိုရီတွင် ခိုလှုံနေချိန်တွင် ကျောင်းပညာရေး၏ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများကို ဖန်တီးထားသည်။ ပညာပေးဟောပြောချက်တွင် လွှမ်းမိုးထားသော ဇာတ်ကြောင်းများသည် ဘေးဖယ်ထားသောကမ္ဘာကို အထက်အောက်နားလည်မှု၏အောက်ခြေတွင် ကြည့်ရှုခဲ့ကြသည်။ အထက်တန်းလွှာများကို နမူနာယူခြင်းဖြင့် လေ့လာမှုသည် ပင်မရေစီးကြောင်း စကားအသုံးအနှုန်းကို အစားထိုးရန် ပံ့ပိုးပေးသည်။ ၎င်းသည် 1) EfP အတွက် သဘောတရားဆိုင်ရာ ချဉ်းကပ်မှုအသစ်များကို ပေးဆောင်ခြင်းဖြင့် သီအိုရီဆိုင်ရာ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ ၎င်းသည် EfP သီအိုရီတွင် ဗေဒင်ပညာဆိုင်ရာ ထပ်လောင်းတင်ပြခြင်း 2) ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ EfP ကို ​​မည်သို့ပြဋ္ဌာန်းထားပုံ 3) နှင့် ကျောင်း၏ဂေဟစနစ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အကြမ်းဖက်မှု၏ ဒေသန္တရ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တို့ကို ပေးဆောင်ခြင်းဖြင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ ရှုထောင့်များကို ဆောင်ကျဉ်းပေးပါသည်။
[သော့ချက်စာလုံးများ- ဖွဲ့စည်းပုံအကြမ်းဖက်မှု၊ ကျောင်းကွန်ဗင်းစီယာ၊ SDG 4.7၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ပညာရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေး၊ ဂန္ဒီ၊ လုံး၀ပညာရေး၊ လူမှုရေးအကွာအဝေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ အကြမ်းဖက်မှု၊ အရင်းအနှီးမျိုးပွားမှု၊ လက်ရွေးစင်ကျောင်း၊ ကျောင်းပညာရေး၊ ဂိတ်စောင့်၊ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ လူမျိုးစုစာရင်း]
ဤသုတေသန၏မိတ္တူကိုရယူရန်၊ စာရေးသူထံ ဆက်သွယ်ပါ။
စွန့်ပစ်ခြင်း သို့မဟုတ် ထောက်ခံအားပေးခြင်း- ကမ္ဘာအသိုက်အဝန်းမှ စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် ပံ့ပိုးကူညီမှုအတွက် အာဖဂန်၏မျှော်လင့်ချက်၊ ရှင်သန်မှုနှင့် အနာဂတ်တည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာ မှတ်ချက်များ
Peace Channel သည်ကျောင်းသားများအတွက်စွမ်းရည်မြှင့်တင်မှုကိုစီစဉ်ပေးသည် (Dimapur, India)
ဧပြီလ 13, 2018 လှုပ်ရှားမှုအစီရင်ခံစာများ 0
Peace Channel သည်highပြီ ၆ ရက်တွင်အထက်တန်းကျောင်းသားများအတွက်စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်ကိုစီစဉ်ခဲ့သည်။ ကျောင်းများတွင်စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်များပြုလုပ်ရန်လှုပ်ရှားမှု၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးကိုဖြန့်ဝေရန်နှင့်လူငယ်များ၏စိတ်ထဲတွင်ငြိမ်းချမ်းရေး၏အရေးကြီးမှုနှင့်အရေးကြီးမှုကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်ဖြစ်သည်။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
အရှေ့တောင်အာရှတွင် Moringa သစ်ပင်တစ်သောင်းစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးမျိုးစေ့ကိုကြဲခြင်း
ဇူလိုင်လ 13, 2021 လှုပ်ရှားမှုအစီရင်ခံစာများ 1
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင်ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေး Manipur (India) သည်အရှေ့တောင်အာရှရှိ moringa သစ်ပင် ၁၀၀၀၀ ကျော်စိုက်ပျိုးရန်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သည်။ လက်ဘနွန်ဆိုတိုသည်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကင်ပိန်း (GCPE) ကိုအားပေးခဲ့သည်။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
Emory University သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူမှုရေး၊
ဧပြီလ 4, 2019 ပညာရေးဆိုင်ရာသင်တန်းများ / အစီအစဉ်များ, သတင်းနှင့်အထူးများ 0
Emory တက္ကသိုလ်သည် Dalai Lama Trust နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံ Vana ဖောင်ဒေးရှင်းတို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ Emory ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ SEE လေ့လာရေး (လူမှုရေး၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာသင်ယူမှု) အစီအစဉ်ကိုNewပြီလ ၄ မှ ၆ ရက်အထိအိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒေလီတွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ SEE Learning သည်ပညာတတ်များအား K-4 ပညာရေး၊ အဆင့်မြင့်ပညာရေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပညာရေးတို့တွင်အသုံးပြုနိုင်သောလူမှုရေး၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအရည်အသွေးများကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်ပြည့်စုံသောမူဘောင်တစ်ခုပေးသည်။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]